नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : इजलास तोकेपनि सुनुवाइ हुन सकेन, सेवाग्राहीहरु पनि मर्कामा, राजीनामा माग्दै आन्दोलन !
इजलास तोकेपनि सुनुवाइ हुन सकेन, सेवाग्राहीहरु पनि मर्कामा, राजीनामा माग्दै आन्दोलन !
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास तोकेपनि सुनुवाइ हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा मात्र सुनुवाइ भयो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकेपनि प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा मात्र सुनुवाइ भएको बताउनुभयो । गत आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीशहरु इजलासमा उपस्थित हुनुभएको छैन ।
यता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले आज सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिएको छ । न्यायालयमा देखिएको विवादको निकास दिन माग गर्दै बारले ५ दिने अल्टिमेटम सहित कालोपट्टी बाँधेर अदालत परिसरमा विरोधको कार्यक्रम गरको हो । बारको विरोध कार्यक्रम आजदेखि तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने बारले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुवीचको विवादले सर्वोच्चको कामकाज विगत केही दिनदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीशको एकल बाहेक अन्य पेसीको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
Posted by www.Nepalmother.com at 12:28 PM